Calaamadaha lagu garto inaad xiriir la leedahay nin wanaagsan - Aayaha
Home XIRIIRKA IYO GUURKA Calaamadaha lagu garto inaad xiriir la leedahay nin wanaagsan
Waxaa jira rag badan oo wanaagsan oo mustaqbal doon ah isla markaana haweenkooda ka caawiya dhinacyo badan.
Waxaan idiin soo gudbineynaa 6 calaamadood oo aad ku ogaan kartid inaad xiriir la leedahay nin wanaagsan.
Hoos ka aqriso calaamadaha uu leeyahay ninka wanaagsan.
Waa mid ka caawiya xaaskiisa inay noqoto qof aad u wanaagsan
Ninka wanaagsan ma daneeyo inuu xiriir kaliya la yeesho haweeneyda; waa mid raba wax kasta oo quseeya iyada. Wuxuu rabaa in xaaskiisa ay noqoto mid karti leh oo aad u wanaagsan —- wuxuu sameeyaa wax kasta uu uga dhigi karo qof wanaagsan.
Ma qariyo jacaylkuu uqabo haweeneydiisa
Ninka wanaagsan kama xishoodo in bulshada uu tuso inuu jecelyahay xaaskiisa, waana tayada uu dheeryahay ragga kale waa mid had iyo jeer ku faana xaaskiisa isla markaana bulshada u muujiya qiimaha ay u leedahay iyo jacaylka uu uqabo.
Wuxuu dareensiiyaa inay wanaagsantahay/qurxantahay
Ninka wanaagsan waa mid xaaskiisa dareensiiya inay qurxantahay; waa kan qiimeeya wanaagga uu arko.
Ma jeclo xaaskiisa kaliya balse waa mid sidoo kale iyada laftirkeeda jecleysiiya nafteeda. Ma ahan kan sheeg sheega cilladaha ay leedahay xaaskiisa.
Ma aamini kartid nin aanan daacad ahayn. Ninka wanaagsan waa mid daacad u ah haweeneydiisa; ma ahan mid wax qaris badan mana ahan nooca sheega beenta cad. Waa mid mar kasta daacadnimo kula nool xaaskiisa.
Rag badan ayaa la haasaawa haweenka xittaa marka ay ogyihiin inaysan mustaqal ka rabin. Ninka wanaagsan waa kan jecel haweeneyda uu mustaqbalka la wadaagayo. Wuxuu maanta iyo berri muujiyaa masuuliyad.
Ma ahan laba wajiile
Ragga qaarkood waa laba wajiileyaal, waxay iska dhigaan waxaysan ahayn, waxay iskaga kaa dhigayaan inay ku jecelyihiin iyagoo aanan ku jecleyn. Ninka wanaagsan waa jecelyahay haweeneydiisa waa mid jacaylka uu dhab ka yahay; ma ahan laba wajiile, sidoo kale waa nin yaqaana sida gabadha wax loogu sheego marka uusan ku faraxsaneyn.
W/Q: Ifraax Kulmiye
Previous article3 Calaamadood Oo Aad Ku Ogaan Kartid In Ninka Uusan Ku Rabin
Next articleHeesta Waxaan aamusnaado ee Faanaada Binti Cumar Gacal oo qoraal ah (Akhriso)
UGAAR AH RAGGA: 5 Waxyaabood aad sameysid oo lamaantaada ku qasba...
UGAAR AH RAGGA: 6 Sirood Oo Cajiib Ah Oo Lagu...